Qaar kamid ah mudanayaasha Barlamanka, ayaa qorshahan ku eedeeyay madaxweynaha dowladda Puntland iyo Guddoonka Barlamanka.
Xildhibaanada oo qaybtood saxaafadda kula hadlay magaalo madaxda Puntland, ayaa sheegay in dastuurku dhigayo in Kalfadhiyada labada ah ee Barlamanka uu furo madaxweynaha talada haya hadii uu ku suganyahay dalka, waxayna tagistiisa magaalada Bosaso ku macneeyeen inay ahayd qorshe uu ku talo galay.
Waxa xuseen in dalka ka jirto xaalad adag oo Abaaro, colaadda iyo doorashooyin isugu jira, sidaas awgeed madaxweynaha looga baahnaa inuu golaha Wakiillada shacabka uga warbixiyo arrimaha socda.
Dhinaca kale qaar kamid ah mudanayaasha ayaa duray Guddoomiyaha Barlamanka Puntland, iyagoo ku eedeeyay inuu u furi waayay xarunta Barlamanka, qaybna ka qaatay inuu baaqdo kulankoodu.
Cududaarka madaxweynaha, ayay ku sheegeen mid aan la aqbali karin islamarkaana loo baajin karin fadhi kamid ah Kalfadhiyada Barlamanka Puntland.
Eedaha Xildhibaanada ma jirto cid katirsan xukuumadda oo ka hadashay.
Baaqashada kulanka Barlamanka Puntland ee magaalada Garowe, ayaa timid xilli madaxweyne Gaas shalay ka dagay magaalada Bosaso xarunta gobolka Bari, maadama fadhiga Xildhibaanadu kusoo aaday xaalad adag oo ay ugu darantahay abaarta waddanka ka jirta ee aan xukuumaddu wax ka qaban iyo dagaalka magaalada Galkacyo ee galay todobaadkii Saddexaad.
Madaxweyne Gaas oo furay Kalfadhiga 39-aad ee golaha Wakiillada Puntland
Puntland 15.06.2017. 13:20
Wasiirka howlaha guud ee Puntland oo dib loogu soo celiyey buug laga soo qishey Somaliland
Puntland 02.12.2016. 12:14
Puntland: Gaas oo xabsiga ka sii daayey sarkaal ka tirsan ururka Al-Shabaab 17.11.2018. 23:28
Mahdi oo Soomaaliya ku matalay Shir madaxeedka Midowga Africa 17.11.2018. 21:06
Gaas oo kala diray Golihii deegaanka Gaalkacyo, kuwa kalena magacaabey 17.11.2018. 18:19
QM oo eedeyn culus u jeedisay dowladda Federaalka Soomaaliya 17.11.2018. 16:40
Safiirka cusub ee Mareykanka oo la kulmay Farmaajo [Sawirro] 17.11.2018. 16:30
Guddiga doorashada KG oo la dhameystiray [Magacyada] 17.11.2018. 13:38